स्वयंसेवाका नाममा नाकढुंगाको सडकमा गुन्डागर्दी : डाक्टरको मानमर्दन, प्रहरी निरीक्षक मुकदर्शक | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:३४
उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्ने निहुँमा टोले स्वयंसेवीले कोरोना संक्रमणको जोखिम र नियन्त्रणमा फिल्डमा खटिएका डाक्टरको हुर्मत लिएका छन् ।
चितवन र हेटौंडामा कोरोना भाइरस परीक्षणको किट सकिएपछि डा।कार्की काठमाडौं हिँडे । सहयोगीसहित गाडीमा हिँडेका उनी उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा करिब १२ बजे आइपुगे । नाकामा सुरक्षाकर्मी देखिए । उनीहरूसँगै उभिएका थिए, युवाका केही हुल । प्रहरीले गाडी रोक्न संकेत गर्‍यो । डा।कार्कीले संकेत गरेकै ठाउँमा गाडी रोके ।
तर, चेकिङ गर्न प्रहरी आएन । हुल बाँधेर उभिएका युवा गाडीनजिक आए । गाडीको झ्याल खोलेर बसेका कार्की भित्रै थिए । एक युवाले निर्देशन शैलीमा गाडीको पास देखाउन भने । कार्कीले पास देखाए । युवाले पासमा रहेको मोबाइल अन गरे । भिडियो बटन थिचे ।
भिडियोलाई फेसबुकको लाइभ मुडमा लगे । अनि कार्कीसँग सोधपुछ गर्न थाले । हुलहुज्जतसहित उत्रिएका युवाका गतिविधिसामु कार्की निरीह बने । खुरुखुरु प्रश्नको जवाफ दिँदै गए ।
केही फेला नपरेपछि युवाले डाक्टरको नाम सोधे । काम गर्ने संस्थाको परिचय मागे । कार्यरत संस्थाको ओहोदा सोधे । उनले सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै गए । कमजोरी पत्ता लगाउन नसकेर दिक्क भएका युवाको ध्यान अचानक डाक्टरको मुखमा पुग्यो । किनकी उनको मुखमा मास्क थिएन । यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर युवाले डा।कार्कीलाई दिनुसम्म दुःख दिए ।
खानतलासी लिनु गैरकानुनी स् केदारनाथ शर्मा–प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
नागढुंगा नाका हुँदै लुकीछिपी काठमाडौं आउनेको सूचना पटक–पटक आएपछि त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबाट आग्रह आयो । सहजीकरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई भनेकै हौँ । तर, खानतलासीमै उत्रन भनेका छैनौं ।
खानतलास गर्न, सोधपुछ गर्न प्रहरीबाहेक कसैलाई पनि अधिकार छैन । कोही व्यक्ति त्यस्ता गतिविधिमा उत्रिए त्यो गैरकानुनी हो । नागढुंगामा त्यस्ता केही अवाञ्छित गतिविधि भएको सूचना आएको छ । घटना विवरण बुझ्ने काम हुँदै छ । दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनेछ ।
ह्यारेसमेन्टबाट दिक्क छु : डा. नारायण कार्की, निर्देशक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमती प्रदेश
चितवन र हेटौंडाको ल्याबमा कोरोना भाइरस परीक्षणको किट सकिएपछि लिन काठमाडौं आउनुका विकल्प थिएन । सहयोगीसहित शुक्रबार बिहान काठमाडौं प्रस्थान गरें । गाडीको पास पनि थियो । करिब १२ बजे नागढुंगा नाका आइपुगें । चेकपोस्टमा केही युवा देखिए ।
सुरक्षाकर्मी पनि सँगै थिए । प्रहरीले हाम्रो गाडी रोक्यो । तर, चेकिङ गर्न युवा अघि बढे । मसँग गाडीको पास मागे । मैले देखाएँ । गाडीको खानतलासी लिने भने । मैले हुन्छ भनेँ । आदेशबमोजिम मैले गाडीको पछाडितर्फको ढोका खोलेँ । सिटमा झोला थियो । खोल्न भने । खोलेर देखाएँ । डिकी पनि खोलेर देखाएँ । तर, उनीहरूको चित्त बुझेन ।
उनीहरूले मेरो मुखमा मास्क खोइ भने । कुरा गर्न मास्क खोलेको भनें । उनीहरूले यही आधारमा टेकेर मेरो हुर्मत लिए । सुरक्षाकर्मी सबै गतिविधि नियालेर बसेका थिए । उनीहरू युवाको हर्कत रोक्न अघि बढेनन् । सुरक्षाकर्मीकै साथ आए जस्तो देखिन्थ्यो ।
त्यसैले प्रतिकार गर्ने हिम्मत मसँग आएन । घटनाले मलाई दुखित तुल्याएको छ । घटना सम्बन्धमा तालुकवाला निकायमा पनि भनेको छु । उनीहरूको एक्सन के हुन्छ ? प्रतीक्षामा म छु । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट